Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 23)
La kulan Energizer Power Max P600S, mobiil leh batari dhan 4500mAh
Energizer wuxuu noo diyaariyay terminaal dhexdhexaad ah oo leh batari aad u weyn oo gaaraya 4500mAh, waa Power Max P600S, oo ah mobiil aan ku arki karno suuqa bishan. Dhammaantiin waxbaan kaaga sheegeynaa!
Xog cusub ayaa soo jeedineysa in taleefoonada Xperia XZ1 Premium, Z1 Plus iyo XZ1s aysan arki doonin iftiinka inta lagu gudajiro CES 2018, in kastoo durba ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan qeexitaanadooda
Kuwani waa dhammaan qeexitaannada xaday ee Xperia XA2, XA2 Ultra iyo L2
Sony waxay diyaarisay seddex terminaal oo lagu dari lahaa bartamaha-shirkadda, waa Xperia XA2, XA2 Ultra, iyo L2, iyo, halkan laga soo bilaabo Androidsis, waxaan haynaa dhammaan faahfaahinta la sifeeyay ee taleefannada casriga ah.
Nokia 6 horeyba waa rasmi, ogow qeexitaankiisa
Nokia 6: Caddaymaha, qiimaha iyo bilaabida ayaa la xaqiijiyay. Faahfaahin dheeraad ah ka hel bartamaha-dhexe ee shirkadda maanta la soo bandhigay.
Ka hel qiimo dhimis DOOGEE BL12000 Aliexpress !!
DOOGEE BL12000, terminal-ka wata 12000mAh baytariga, wuxuu Aliexpress ka joogaa 15%. Ka faa'iideyso xaqiiqda ah in dalabkan la heli karo oo keliya illaa 6-da Janaayo. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
OUKITEL K10: Taleefankii ugu horreeyay ee wata batari dhan 11.000 Mah
OUKITEL K10: La kulan taleefankan casriga ah oo leh 11.000 mAh batari. La soco waxbadan oo ku saabsan casriga cusub ee OUKITEL oo suuqa soo gali doona dhawaan.
Exynos 9810: processor-ka Galaxy S9 hadda waa rasmi
Samsung waxay soo bandhigeysaa dhammaan faahfaahinta Exynos 9180. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan processor-ka cusub ee Samsung ee geli doona Galaxy S9.
ZTE Axon M waxaa laga bilaabi doonaa bisha Janaayo 16 Shiinaha
ZTE Axon M waxaa si rasmi ah looga daahfuri doonaa dalka ugu weyn Aasiya. Dhacdadu waxay ka dhici doontaa Beijing, halkanna Androidsis, waxaan kuu haynaa faahfaahinta.
OPPO waxay xagaaga ka bilaabi doontaa iibinta mobilada Spain
OPPO waxay si rasmi ah u iibin doontaa telefoonada Spain xagaagan. Ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkaddu ku gaadhay Spain.
LG Q6 Plus iyo Q6 Alfa horeyba waxaa looga iibiyay Spain
LG Q6 Plus iyo Q6 Alfa ayaa horeyba looga heli karaa Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan labada taleefannada cusub ee dhexdhexaadka ah ee LG.
Samsung waxay rajeyneysaa inay iibiso 320 milyan oo taleefan ah sanadka 2018
Samsung waxay aamminsan tahay inay iibin doonaan 320 milyan oo taleefannada gacanta ah sannadka 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan saadaasha iibka ee waddamada kala duwan ee Kuuriya.
SHARP Aquos S3 (FS8032) waxaa laga aqoonsan yahay Taiwan
SHARP Aquos S3 wuxuu horey uhelay shahaado kahelaysa cadeynta iyo nidaaminta hay'ada NCC. Tani waxay u imaan doontaa inay ku guuleysato Aquos S2 iyo, halkan laga bilaabo Androidsis, waxaan ku tusi doonaa astaamaheeda.
Lenovo K320t Noocyada Buuxa Oo La Soo Bandhigay
Lenovo K320t: Hoos-udhac cusub oo leh shaashad 18: 9 ah. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-dhamaadka cusub ee sumadda Shiinaha ee horay looga bilaabay waddankaaga.
Liiska telefoonnada gacanta ee Xiaomi oo leh NFC
Soo hel liistada dhammeystiran ee qalabka Xiaomi ee hadda leh NFC, tikniyoolajiyadda taas oo ay ugu wacan tahay suurtogalnimada in lagu bixiyo lacagaha moobaylka.
Huawei Enjoy 7S waxaa loo soo bandhigi doonaa adduunka oo dhan sida Huawei P Smart
Huawei P Smart: Magaca caalamiga ah ee Huawei Enjoy 7S. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga caalamiga ah ee nooca Huawei.
HTC iyo Motorola ma yareeyaan waxqabadka mobilada leh baytariyo duug ah
HTC iyo Motorola ayaa sheegay inaysan ka gaabin taleefannadooda hore. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan hadalada labada shirkadood kadib fadeexadii Apple.
Samsung Galaxy S9 iyo S9 + waxay gudbaan shahaadada FCC
Samsung Galaxy S9 iyo S9 + waxay u socdaan hal talaabo dheeraad ah si ay u bilaabaan, maanta waxay ka shahaado FCC, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta.
ZTE Blade V9 wuxuu la yimaadaa shaashadda 18: 9 iyo Snapdragon 450
ZTE wuxuu diyaarinayaa taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee casriga ah oo leh shaashad 18: 9 ah, waxaanan horeyba kuugu haynaa dhammaan qeexitaannada iyo astaamaha adiga. Dhammaantiin waxbaan kaaga sheegeynaa!
Qaar ka mid ah Samsung Galaxy Note 8 ayaa barafooba marka batterigu dhammaado
Galaxy Note 8 wuxuu la dhibaatoonayaa dhibaatooyinka batteriga ee moodooyinka qaar. Ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka taleefanku ku haysto batteriga aan lacag ka qaadin,
Samsung Mobile Care, waa caymis rasmi ah oo loogu talagalay casrigaaga Samsung
Samsung Mobile Care, waa caymis rasmi ah oo ka socda Allianz si loo daboolo shilalka ku lug leh casrigaaga cusub ee Samsung casriga ah
Mobiles-yada ay Huawei bilaabi doonto sanadka 2018 horay ayaa loo yaqaanay. Raadi wax badan oo ku saabsan aaladaha ay sumaddu soo saari doonto sanadka soo socda.
Qaado LEAGOO T5C iskuna keydi naftaada in ka badan $ 33 !!
LEAGOO T5C waa qiimo dhimis boqolkiiba 26 ah, wuxuu na keydinayaa illaa 35 euro. Tani waxay ku socotaa Aliexpress waqti xaddidan. Soo ogow!
Tabaha ugu fiican Google Pixel 2
Toddobada xeeladood ee ugu fiican Google Pixel 2. Soo ogow tabaha ugu fiican ee maanta la heli karo si aad uga faa'iideysato Google Pixel 2.
Dib u eegista DOOGEE BL7000
Waxaan falanqeynay DOOGEE BL 7000, oo ah taleefan casri ah oo wata batari 7060 mAh ah iyo labo kamarad oo ka socota Samsung oo dhan 150 euro. Moobiilkan Shiinaha ahi ma u qalmaa?
Waxaan horeyba u ogaanay qeexitaanada buuxa ee Galaxy J2 2018
Galaxy J2 2018: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Siideynta ayaa xaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan saamiga cusub ee Samsung ee dhowaan soo socda.
Nokia iyo Huawei waxay gaareen heshiis patent-ka ah oo ay si wada jir ah u wada shaqeynayaan, heshiis la mid ah kan shirkadda Finnish-ka ee shirkadda Xiaomi
Sharafta 9 Lite hadda waa rasmi, ogow qeexitaankiisa!
Maamuuska 9 Lite: qeexitaanka rasmiga ah, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee Sharafta dhow.
Ma jiri doono Xiaomi Redmi Note 5, Redmi 5 Plus ayaa beddelay
Xiaomi Redmi Note 5 iyo Note 5 Plus laguma soo bandhigi doono suuqa. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee arrintan ku saabsan.
Huawei P10 iyo P10 Plus waxay bilaabayaan inay helaan Android Oreo
Shirkadaha Huawei ee ugu dambeeya si ay u gaaraan suuqa, kala duwanaanta P10, ayaa bilaabay inay helaan Android Oreo, oo markii hore laga bilaabay Shiinaha
Weimei We Plus 3 qeexitaannada ayaa la muujiyay
Weimei We Plus 3: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka qalabkan suuqa Isbaanishka.
DOOGEE X55: Taleefanka gacanta ee SmartView-ka ah ee Dunida ugu Horeeya oo wata Akhriska Sawirka Faraha
Doogee wuxuu noo keenayaa taleefanka ugu horreeya ee keliya ee loo yaqaan 'Fulview phone' oo leh akhriska faraha. Waa Dooge X55, terminal shaashaddiisu dhan tahay.
Nokia 9 wuxuu dhex maraa FCC, waxaan ku tusaynaa qeexitaanada
Nokia 9 oo in badan la sugayay ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa. Inta la soo bandhigayo, horay ayey uga soo gudubtay FCC oo qeexitaannada ayaa la xaday.
Astaamaha ugu horreeya ee soo socda ee Galaxy S9 + waa la sifeeyaa
Ragga ka socda Geekbench ayaa boggooda ku soo daabacay astaamaha ugu horreeya ee Samsung Galaxy S9 +, oo ah terminal la soo bandhigi doono dhammaadka bisha Febraayo.
Ku hel Vernee X qiimo aan caadi ahayn!
Vernee X, taleefankii ugu horreeyay ee Fullview oo wata P23 Helio, ayaa lagu iibiyaa GearBest. Fursad aan caadi aheyn oo aad kuheli karto moobilkan!
Kani waa Ulefone Power 3, taleefan leh is-maamul weyn
Ulefone waxay soo bandhigeysaa Elefone Power 3, oo ah meel dhexdhexaad ah oo leh batari dhan 6.080mAh taasoo hubin doonta waqti goonni ah oo wanaagsan.
Kuqadi LEAGOO M9 cusub hada qiimo dhimis qaas ah
Waa waqtigii la heli lahaa LEAGOO M9 cusub, oo ah taleefan afar kamarad leh oo leh shaashad aan xuduud lahayn oo ka yar $ 60
Samsung iyo qiimo dhimistiisa weyn ee Galaxy Note 8 ee Kirismaska
Samsung Galaxy Note 8 Gold, oo ah nooca loo yaqaan 'Dual SIM', ayaa qiimo dhimis dhan 260 euro ka heli doona dukaanka rasmiga ah ee Samsung, waxaas oo dhanna wakhti xaddidan.
Nubia Z17S ayaa si rasmi ah u timid Spain
Nubia Z17S ayaa lagu iibinayaa Spain Isniinta. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ee timaadda Spain.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa soo saarista Galaxy A8 iyo A8 +, astaamaha iyo qeexitaannada
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa hadda si rasmi ah u soo bandhigtay terminal-ka cusub ee A-range, A8 iyo A8 +, oo ah terminaallo dhexdhexaad ah.
Nokia 5 wuxuu marayaa tijaabadii ugu adkeyd ee adkaysi, ma dhaafi doontaa?
Nokia 5 wuxuu maraa baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything. Raadi wax badan oo ku saabsan tijaabada taleefanka caanka ah ee Nokia.
Dib-u-eegista Fiidiyowga ee qoto-dheer Meiigoo S8, oo ah midka ugu fiican ee Samsung Galaxy S8 Plus
Dib-u-eegis fiidiyow oo dhammaystiran oo ballaadhan oo Meiigoo S8 ah, kaas oo aniga ah midka ugu fiican ee Samsung Galaxy S8 Plus.
Falanqaynta M-Faraska 1-daahir
Falanqaynta M-HORSE Pure 1, taleefan casri ah oo raqiis ah oo leh 5,7 "shaashad iyo Sony laba kamarad oo ka yar 100 euro, ma u qalantaa?
OUKITEL K6, xaasidnimada heerka dhexe
Soo ogow OUKITEL K6, ballanqaadka cusub ee shirkadda ee mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan illaa maanta, 6 "shaashadda iyo qalabka 'Helio P23'
Huawei Enjoy 7S hadda waa rasmi: Ogow qeexitaankiisa
Huawei raaxayso 7S: qeexitaanada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax badan oo ku saabsan qalabka cusub ee Huawei iyo qeexitaankiisa.
Qeexitaannada soo socda ee Sony XZ waa la xaday
Shirkadda caalamiga ah ee 'Sony' waxaa lagu yaqaan sanadihii la soo dhaafay, iyada oo aan garaneyn sida loola xiriiro adeegsadayaasheeda, gaar ahaan ...
BlackBerry Priv wuxuu joojiyaa helitaanka wararka laba sano ka dib markii la bilaabay
Laba sano ka dib markii la bilaabay iyo sidii loo ballanqaaday BlackBerry, nooca loo yaqaan 'Priv model' wuxuu bilaabay inuu joojiyo helitaanka wararka amniga
Shakhsi ahaan taleefankaaga gacanta ugu samee sawir-gacmeedyada OnePlus 5T Star Wars
Waa kuwan dhowr sawir oo laga soo qaaday filimkii ugu dambeeyay ee Star Wars: Qeybta VIII Jedi Ugu Dambeysay
Telefoonka Razer horey ayaa looga iibiyay dalka Spain
Razer wuxuu iibiyaa Razer Phone iibka Spain. Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka aaladda Razer suuqa Isbaanishka.
Noocyo kala duwan oo ka mid ah waxa uu noqon lahaa Samsung Galaxy A8 2018 ayaa xaday
Dhawaan dhowr tirooyin ayaa laga dusiyay waxa noqon doona Samsung Galaxy A8 ee soo socota oo la heli doono sanadka soo socda. Waxaan ku tuseynaa sawirada!
Sawirro cusub, oo hadda fiidiyoow ah, oo ah sida Galaxy S9 iyo S9 Plus ay noqon karaan
Waxaan sii wadaynaa sawirada Galaxy S9, laakiin markan waxaan kuusoo bandhigeynaa muuqaal muuqaal ah oo ah labada nooc, Galaxy S9 iyo Galaxy S9 Plus.
Vernee X, oo ah taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Android' oo buuq sameyn doona
La kulan Vernee X cusub, taleefan casri ah oo leh shaashad 6-inji ah, 6 GB oo RAM ah, qalabka cusub ee MediaTek Helio P23 iyo waxyaabo kaloo badan.
Orod oo ka qayb qaado Bixinta Meiigoo S8 tan, midka ugu fiican ee Samsung Galaxy S8 Plus ee gurigaaga aadi kara Maalinta Kirismaska.
Kuwani waa Amazon waxay ku siisaa taleefannada casriga ah maanta
Amazon waxay noo keenaysaa qiimo dhimis aan caadi ahayn iyo qiimo dhimis waqti xaddidan oo ku saabsan taleefannada casriga ah iyo kuwa saacadaha qaaliga ah lagu daawado. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
10ka Telefoon ee ugu sareeya 2017
Soo ogow TOP 10 taleefannada gacanta ee 2017 oo leh xulashada taleefannada ugu caansan ee suuqa ku dhacay sanadkan.
Sawirada xaday iyo qeexitaanada Huawei P11
Faahfaahinta cusub iyo astaamaha shirkadda xiga ee Huawei waa la sifeeyaa. Kani waa Huawei P11, oo ah heer sare oo la imaan doona qeexitaanno cajiib ah.
Ka hel $ 40 at Vernee firfircoon
Ka faa'iideyso qiimo dhimista $ 40 ee Vernee Active ee Aliexpress. Raadi wax badan oo ku saabsan qiimo dhimista weyn ee taleefankani leeyahay.
Dalabyo aan la diidi karin ayaa ku jira taleefannada casriga ah ee la heli karo maalmo yar
Halkan waxaan kaaga tagnay xulashada ugu fiican ee dalabyo aan la diidi karin oo ku saabsan taleefannada casriga ah oo kaliya maanta oo ah qiimo aad u jaban.
Qiima dhimistaan ​​ku samee taleefannada casriga ah ee Light in the Box. Raadi wax badan oo ku saabsan dalabyadan uu keydka caanka ahi keensado.
Sidii caadada u ahaydba, terminal-kii ugu dambeeyay ee arkay qeexitaankiisa sifeeysan kahor soo bandhigidiisu wuxuu ahaa Huawei Enjoy 7S
Samsung waxay soo saartay cusbooneysiin dayactir cusub oo loogu talagalay Galaxy Note 8
Samsung ayaa hadda ka bilaabatay Yurub, casriyeyn cusub oo dayactir ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka hawlgalka iyo shaqooyinka kale ee la hagaajiyay
Sicir-dhimista illaa 70% ee dhiirrigelinta Gearbest Kirismaska
Ololaha Kirismaska ​​ee Gearbest: Qiimo-dhimista illaa 70%. Raadi wax badan oo ku saabsan ololaha Kirismaska ​​ee hadda ka bilaabmaya Gearbest.
Oukitel K10, oo ah taleefan casri ah oo wata 11.000 mAh baytariga oo soconaya toddobaad
Oukitel wuxuu iibin doonaa K10 bilowga sanadka soo socda, terminal ay ku taalo 11.000 mAh oo batari ah oo aysan muhiim u aheyn in laga qaado usbuuc gudihiis
Shaandheeyey qeexitaanka iyo taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Mi 7 iyo Mi 7 Plus
Xiaomi Mi 7 iyo Mi 7 Plus: Tilmaamaha iyo taariikhda soo bandhigida ayaa xaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada sare ee sumadda.
Firfircoon Xiaomi Mi A1 FM Raadiye aan xidid lahayn
Cashar fudud oo fiidiyow ah oo ficil ah oo aan ku tusayo sida loo kiciyo Raadiyaha FM-ka ee Xiaomi Mi A1 aan lahayn ROOT iyo iyadoo aan luminin damaanadda rasmiga ah.
Tabaha ugu fiican ee loogu talagalay Xiaomi Mi A1
Tabaha ugu wanaagsan ee looga faa'iideysto Xiaomi Mi A1. Soo ogow xeeladaha ugu fiican ee noo oggolaanaya inaan sida ugu wanaagsan uga faa'iideysanno qalabka Xiaomi.
Maqaalkani waxaan ku tusineynaa sida aan u soo dejisan karno dhammaan sawir-qaadayaasha ka yimid Huawei Mate 10 Pro
Khiyaamada ugu fiican ee OnePlus 5T
Khiyaamada ugufiican ee waxbadan looga faa'iideysan karo OnePlus 5T. Soo ogow khiyaamadan kaa caawin doona inaad sida ugu badan uga faa'iideysato OnePlus 5T.
Motorola si ay u soo bandhigto daabacaad kooban oo Star Wars Moto Mod
Motorola sidoo kale waxay ku biirtay Star Wars fever waxayna sii deyn doontaa Star Wars: The Last Jedi Moto Mod oo loogu talagalay Moto Z, inkasta oo hadda kaliya Shiinaha
7 sababood oo loo iibsado LEAGOO 5Tc cusub
Waxaan ku tusineynaa 7 sababood oo sababta Leagoo T5c ay tahay ikhtiyaar aad u xiiso badan oo lagu xisaabtamo marka la cusbooneysiinayo casriga casriga ah.
1 GB Xiaomi Mi A32 ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Nooca 32 GB ee Xiaomi Mi A1 ayaa yimid Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka noocaan cusub ee qalabka Xiaomi.
Meiigoo S8, unboxing iyo dareeno ugu horeysay ee ugu clone ugu fiican ee Samsung Galaxy S8 Plus
Meiigoo S8 waa aniga midka ugu fiican Samsung Galaxy S8 Plus oo leh naqshad iyo tayo dhammeystiran, shaashad cajiib ah iyo qiimo waali ah. In ka yar € 150 waxaad heysataa 4 GB oo RAM ah, 64 GB ROM iyo Android 7.0, isku dar ah oo qancin doona iibsadayaasha Meiigoo S8.
Samsung Galaxy S9 ma arki doono iftiinka CES ee Las Vegas
Ugu dambeyntiina, waxay u muuqataa in la xaqiijiyay in Samsung Galaxy S9 uusan si rasmi ah u arki doonin iftiinka maalinta illaa MWC 2018 lagu qabto magaalada Barcelona.
Sida laga soo xigtay Warbixinnada Macaamiisha, Galaxy S8 aad ayuu uga fiican yahay iPhone X
Sida laga soo xigtay hay'adda Warbixinta Macaamiisha, Galaxy S8 waa taleefan casri ah oo lagula taliyo iibsashada marka loo eego Apple's iPhone X, sababo kala duwan oo aan kuu sharraxno
Huawei Nova 2S qeexitaan rasmi ah ayaa shaaca laga qaaday
Ka baro faahfaahinta buuxda ee Huawei Nova 2S. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan shay-badeedka cusub ee sumadda Shiinaha ee dhawaan suuqa soo geli doona.
Xiaomi ma awoodi doonto inay adeegsato astaanta "Mi Pad" ee Yurub maxaa yeelay waxay u egtahay Apple "iPad" ka Apple
Sidaad filan lahayd, maxkamadda Yurub waxay xaqiijisay in kiniinka Xiaomi "Mi Pad" uusan isticmaali karin magacaas inta lagu iibinayo Yurub.
Galaxy A5 iyo A7 2018 waxaa loo bixin doonaa magacyada Galaxy A8 iyo A8 +
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in kala duwanaanshaha Galaxy A5 iyo A7 2018 loo bixin doono magacyada A8 iyo A8 + sanadka soo socda
Honor 7X wuxuu si rasmi ah u yimid Spain
Maamuuska 7X: Sooc, qeexitaan iyo helitaan. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan heerka dhexe ee sharafeed ee cusub ee hadda laga heli karo Spain.
Xiaomi Mi 7 ee soo socda ayaa isticmaali doona processor-ka Snapdragon 845
In kasta oo Samsung Galaxy S9 la filayay inuu noqdo aaladdii ugu horreysay ee qaadda Snapdragon 845, maanta Xiaomi ayaa kadis ku noqotay oo ku dhawaaqday guuleystaha
Oukitel wuxuu bilaabi doonaa OUKITEL K6 kahor dhammaadka sanadka, ogow noocyadiisa!
OUKITEL K6: Cadeysyada, qiimaha iyo bilaabida. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka casriga ah ee cusub ee la bilaabi doono Kirismaska.
Samsung Galaxy S9 ayaa ku garaaci kara suuqa ilaa 512 GB oo keyd ah
Xanta ugu dambeysa ee la xiriirta Samsung ee Galaxy S9, ayaa sheeganeysa in awoodda ugu badan ee soo socota ee Samsung ay yeelan karto ay noqon doonto 512 GB
Ku hel OnePlus 5T qiimo dhimis khaas ah Banggood
Sicir-dhimis gaar ah oo ku saabsan OnePlus 5T ee Banggood. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dhimista gaarka ah ee laga heli karo OnePlus 5T illaa Diseembar 8.
Sawiradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Xiaomi Redmi 5 iyo Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 iyo Redmi 5 Plus: Sawirro rasmi ah oo rasmi ah. Soo ogow sawirradii ugu horreeyay ee rasmiga ah ee labada taleefannada cusub ee Xiaomi.
Ku hel qiimo jaban LEAGOO T5c dhiirrigelinta qiimaha ugu fiican
Ku hel dallacsiintan gaarka ah LEAGOO T5c weyn qiimo qaali ah, waxaad haysataa illaa iyo Diseembar XNUMX inaadan u oggolaan inay ka baxsato.
Yoigo wuxuu na siinayaa Samsung Galaxy S8 bishaan Diseembar, oo ah terminaal heer sare ah oo leh qiimo dhimis 300-euro ah.
Ku hel OUKITEL MIX 2 kaliya $ 99,99
OUKITEL MIX 2 waxaa loo heli karaa $ 99,99 waqti xaddidan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan kor u qaadista qalabkan oo lagu heli karo qiimo gaar ah.
Vernee Firfircoon: Taleefanka casriga ah ee ugu horreeya ee naxdinta leh
Vernee Firfircoon: Taleefan casri ah, taleefan casri ah loo qaabeeyey oo hadda la heli karo. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Vernee Active, taleefanka cusub ee ka hortagga shoogga.
Sida loo helo Samsung Galaxy J5 bilaash ah oo leh Yoigo
Mid ka mid ah dalabyada ay Yoigo na siiso bishan Diseembar, waxay na siisaa Galaxy J5 2017 gebi ahaanba bilaash iyada oo aan la bixin wax euro ah bishiiba.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime: Qeexitaannadii ugu horreeyay ayaa xaday. La kulan faahfaahinta koowaad ee taleefanka Samsung.
OnePlus 5T Star Wars Edition ayaa shaaca ka qaaday
OnePlus 5T Star Wars Edition ayaa shaaca ka qaaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan noocaan ah dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ee bilaabeysa Diseembar 16.
Swarovski SMARTgirl Limited Edition, a Galaxy S8 + oo leh kiis gaar ah oo ah Swaroski crystals oo keliya iibka Spain
Shirkadda laga leeyahay Kuuriya ee Samsung ayaa soo saartay kiis gaar ah oo lagu daray Galaxy S8 +, kaas oo kaliya laga heli karo Spain
Saacadda Samsung Gear Sport ayaa hadda laga heli karaa Spain
Samsung Gear Sport ayaa horay looga iibiyay dalka Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan saacadda cusub ee isboortiga Samsung ee hadda laga heli karo suuqa Isbaanishka
Galaxy Note 8 Cusboonaysiinta Amniga Noofambar Hadda Waa La Heli Karaa
Casriyeyntii ugu dambeysay ee amniga ee loogu talagalay Galaxy Note 8 ayaa hadda laga heli karaa waddamada qaarkood, cusbooneysiin sidoo kale noo keenta wararka hawlgalka
Sawirada iyo astaamaha ugu horreeya ee Huawei Nova 2S waa la sifeeyaa
Taxanaha caanka ah ee Huawei Nova wuxuu qarka u saaran yahay inuu korsado xubin kale oo cusub: Huawei Nova 2S, oo ah taleefan gacmeed heer sare ah oo ballan qaada inuu noqon doono terminal awood leh.
Telefoon cusub 'clamshell' Samsung W2018 oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha
Samsung W2018-ka cusub ayaa si rasmi ah u soo muuqday, waxaan kuu sheegaynaa dhammaan faahfaahinta mobilka nooca 'qolofka' ah ee dhowaan iman doona suuqa Shiinaha.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee amniga ee Galaxy S8 iyo S8 + ayaa curyaamisay amarka degdegga ah
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee amniga ee Galaxy S8 iyo S8 + waxay umuuqataa inay xumaatay howlihii nidaamka xawaareynta degdegga ah ee boosteejooyinkan.
Waxaan falanqeyneynaa Bluboo S8, oo ah xarun dhexdhexaad ah oo leh waxqabad aad u wanaagsan
Shirkada Bluboo waxay na siisaa nooca S8, oo ah terminal si aad ah loogu hagaajiyay sicirka oo leh faa iidooyin aad u layaableh maalinba maalinta ka dambeysa isticmaale kasta.
Xiaomi Redmi 5A waxaa lagu soo bandhigay Shiinaha | Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa taleefankeeda casriga ah ee cusub kaas oo xukumi doona heerar hoose oo leh tayada / qiimaha ugu fiican. Waa Xiaomi Redmi 5A. Waan kuu sheegeynaa!
Tijaabada adkaysiga taleefanka ee Razer xaaladaha ugu adag
Imaatinka terminal cusub oo suuqa ku yaal, kanaallada YouTube-ka ugu waaweyn waxaa ka buuxa fiidiyowyo ...
Dhalinyarada Oppo F5: Nooca yar ee awooda yar ee Oppo F5 ayaa hada rasmi ah
Soo saaraha casriga ee Oppo, wuxuu noo soo bandhigayaa terminal cusub oo dhawaan la soo saari doono. Waa Oppo F5 Dhalinyarada, meel dhexaad ah.
OnePlus 5T wuxuu ku dhawaaqay lava red
OnePlus 5T waxaa lagu dhawaaqay Lava Red. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca cusub ee OnePlus 5T ee midabkan cusub ee cas.
Heerka 'Galaxy S8' wuxuu helayaa midab cusub: casaan burgundy ah
Xadka Galaxy S8 ayaa helay midab cusub oo lagu dhamaystirayo kala duwanaanta laga heli karo. Waxaan ka hadlaynaa casaanka burgundy.
Sharafta V10 hadda waa rasmi: Ogow qeexitaankiisa
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan soo bandhigida Honor V10, oo ah dhamaadka sare ee shirkadda ee Shiinaha. Wax walba oo ku saabsan qalabka horay ayaa loo yaqaan.
Naqshad fikradeed ee OnePlus 6 ayaa ka muuqata fiidiyowga
In kasta oo OnePlus 5T uu hadda suuqa ku dhuftay, haddana OnePlus 6 wuxuu bilaabay inuu sameeyo cinwaannada cinwaannada isagoo uga mahadcelinaya muuqaalka naqshad fikrad
Ka hel OUKITEL MIX 2 Gearbest kaliya $ 229,99
OUKITEL MIX 2: Qeexitaannada iyo soo bandhigida Gearbest hadda waa la heli karaa. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee OUKITEL ee hadda la heli karo si loo keydiyo.
Dib u eeg Oukitel C8 ah Android 7.0 Android raqiis ah oo aniga iga yaabisay
Halkan waxaan kaaga tagayaa dib-u-eegista fiidiyowgan oo dhammaystiran ee Oukitel C8, oo ah terminal aad u xiiso badan oo loogu talagalay isticmaalaha raadinaya terminal heer-gal ah oo ah 'Android'.
Oppo A79 faahfaahin buuxda ayaa shaaca ka qaaday
Oppo A79 qeexitaan buuxa ayaa shaaca laga qaaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan aaladda cusub ee loo yaqaan 'Oppo' ee aad horeyba wax uga taqaannay wax walba.
Beta-kii ugu horreeyay ee Android Oreo ee OnePlus 5 ayaa hadda la heli karaa
Cusboonaysiinta mudada dheer la sugayay ee OnePlus 5 ee ku socota Android Oreo ayaa hadda lagu sii daayay beta dhammaan dadka isticmaala ee danaynaya rakibidda.
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee Nokia 9
Xaday Nokia 9 sawirada naqshada. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefankan cusub ee Nokia oo aan hore u ogaanay naqshaddiisa daadashada awgeed.
Sony XZ wuxuu bilaabaa helitaanka Android Oreo
Xadka Sony XZ wuxuu bilaabay inuu helo cusbooneysiinta ay isticmaaleyaashani sugayeen, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay ku raaxaystaan ​​Android Oreo
Samsung Galaxy S6 wuxuu heli karaa Android Oreo
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Samsung ay ka shaqeyneyso sidii loo cusbooneysiin lahaa halyeeyga Samsung S6 nooca ugu dambeeyay ee Android Oreo
Google Pixel XL 2 wuxuu maraa baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything, ma dhaafi doonaa?
JerryRigDhammaan wax u adkaysiga tijaabada ee Google Pixel XL 2. Taleefanka Google wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan. Maxaa dhici doona?
OnePlus 5 wuxuu heli doonaa aqoonsiga wajiga ee OnePlus 5T cusbooneysiinta mustaqbalka
Akhbaar wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala OnePlus 5 ayaa ah in nidaamka aqoonsiga wajiga ee OnePlus 5T uu u imaan doono kii ka horreeyay.
Beta-kii ugu horreeyay ee Android Oreo ee loogu talagalay Moto Z iyo Z2, ayaa horeyba looga heli karaa Brazil, si inyar loogu kordhiyo dalalka intiisa kale.
Tani waa waxa moobaylkii ugu horreeyay ee bilaa sharaf ahi u ekaadaan, V10
Laba toddobaad ka hor soo bandhigideeda, iyada oo loo marayo Weibo, sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Honor V10 ee soo socda ayaa la daadiyay
Beta-saddexaad ee Android Oreo ee Galaxy S8 iyo S8 Plus hadda waa la heli karaa
Ragga Samsung waxay hadda bilaabeen beta-kii saddexaad ee Android Oreo ee loogu talagalay boosteejooyinka Galaxy S8 iyo Galaxy S8 Plus
Waxyaabaha ugu sarreeya ee bixiya Qaybaha PC-ga ee Jimcaha Madow, Xiaomi Gaarka ah!
Halkan waxaan kaaga tagayaa tan TOP Waxay siisaa PC Components gaar ahaan Xiaomi iyo Black Friday gaar ah 2017 oo leh dalabyada ugu wanaagsan ee boosteejada Xiaomi.
Ka faa'iideyso qiimo dhimista taleefannada casriga ah ee LEAGOO Jimcaha Madoow ee TomTop
Lacag dhimista jimcaha madow ee casriga ah LEAGOO ee TomTop. Ha moogaanin qiimo dhimista nagu sugeysa qalabka astaamaha.
Samsung waxay bilaabi kartaa daabacaadda Galaxy Note 8 Star Wars
Xog sir ah oo dhowaan soo baxday ayaa ka digtay in Samsung ay bilaabi karto daabacaadda 'Star Wars' ee Galaxy Note 8, halkan waxaan kuugu sheegeynaa faahfaahin dheeraad ah
Qalabka Galaxy J ee Samsung ayaa qaadan doona labada kamaradood ee dambe ee 2018
Galaxy J-ga cusub ee imanaya suuqa soo socda ayaa ugu dambayntii hirgelin kara kamaradda gadaal laba-geesoodka ah.
Ka iibso Xiaomi Mi A1 qiimaha ugu fiican suuqa
Marka xigta waxaan kuu keenayaa dalabka ugu fiican ee suuqa si aad ugu iibsato Xiaomi Mi A1 qiimo aan laga adkaan karin, qiimaha ugu hooseeya iyo dammaanad buuxda.
Waxaan ognahay buugga rasmiga ah ee BLU ee Spain
Waxaan horey u ogaanay buugga taleefoonada casriga ah ee BLU ay ku bixin doonto Spain. Dhamaantood wax bay wadaagaan; naqshadeynta, waxqabadka iyo qiimaha wanaagsan. Ayaa wax badan siiya?
OnPlus 5T wuxuu maraa imtixaanka ugu caansan ee adkeysiga, ma dhaafi doonaa?
OnPlus 5T wuxuu maraa imtixaanka ugu caansan ee adkeysiga, ma dhaafi doonaa? Ka ogow wax badan oo ku saabsan imtixaanka dulqaadashada ee uu maro OnePlus 5T.
Noocyada Galaxy S9 ayaa ku faafay Geekbench
Saddex bilood ka hor soo bandhigga rasmiga ah ee Galaxy S9, oo ah calanka cusub ee Galaxy, ayaa hadda soo maray Geekbench.
Qeexitaanka Samsung Galaxy J5 Prime 2017 iyo J2 Pro 2018 waa la sifeeyey
Faahfaahinta labada terminaal ee cusub ee Samsung ee lagu dari doono taxanaha J waa la sifeeyey: Iyagu waa Galaxy J5 Prime 2017 iyo J2 Pro 2018.
Faahfaahinta Sharafta V10 hore ayaa loo yaqaan
Faahfaahinta Sharafta V10 hore ayaa loo yaqaan. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee la soo bandhigi doono bisha Diseembar 5.
Qiimaha Mooshinka BlackBerry wuxuu noqon karaa kan ugu weyn ee la tartama
BlackBerry wuxuu suuqa kula soo noqon doonaa qaabkiisa cusub ee "Motion", oo ah taleefan casri ah oo si fiican u qalabaysan kuna bilaaban doona qiimo aan la tartami karin.
Sawirradii ugu horreeyay ee Huawei P11 Plus waa la sifeeyey
Dhowr bilood ka hor intaan la soo bandhigin, sawirradii ugu horreeyay ee Huawei P11 Plus ayaa hadda ku sii fiday shabakadda bulshada Shiinaha ee Weibo
Kuwani waa qeexitaannada Honor 6A Pro ee horeyba u yimid Yurub
Maamuus 6A Pro: Dhamaadka dhamaadka-hoose ee horeyba looga heli jiray Talyaaniga. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee loo yaqaan 'Honor phone' oo horeyba uga jiray suuqa Yurub.
Dib u eeg Nokia 6
Halkan waxaan idinkaga tegayaa Dib-u-eegista ballanqaadka ah ee Nokia 6, oo ah terminal sida ay qiimaheedu aad uga hooseeyo boosteejooyinka kale ee isku qiimaha ah
Oukitel K5 cusub, wuxuu raacayaa isbeddellada 18: 9 shaashadda
Soosaarida soo socota ee Oukitel waa nooca K5, terminal leh shaashad aad u weyn oo 5,7-inji ah oo qaabkeedu yahay 18: 9.
YouTube 12.44 ayaa hadda u oggolaanaya qanjaruufo shaashadda inuu ku habboon yahay fiidiyowga illaa 18: 9 shaashadood
Cusboonaysiinta xigta ee App-ka YouTube waxay ku taageeri doontaa 18: 9 shaashad marka shaashadda laga garoocayo
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee OnePlus 5T cusub
Haddii aad rabto inaad soo dejiso waraaqaha sawirada ee cusub ee OnePlus 5T, qodobkan waxaan kaaga tagaynaa xiriiriyeyaasha si aad ugula soo baxdo xalka 4k.
OnePlus 5T hadda waa rasmi: Ogow dhammaan faahfaahinta
Raadi wax badan oo ku saabsan OnePlus 5T, kaas oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay. Waxaan horey u ogaanay qeexitaankiisa oo dhameystiran, qiimaha iyo helitaanka.
Xiaomi Redmi 5 iyo 5 Plus ayaa imaan doona maalmaha ugu dambeeya Nofeembar
Xiaomi Redmi 5 iyo Redmi 5 Plus waxay imaan doonaan dhamaadka Nofeembar waxayna qeyb ka noqon doonaan bartamaha / hooseeya ee shirkadda Aasiya.
Doogee wuxuu ku shaqeynayaa taleefan casri ah oo leh shaashad jilicsan
Soo saaraha Shiinaha Doogee wuxuu soo saarayaa taleefan casri ah oo leh shaashad jilicsan oo arki kara iftiinka maalinta sanadka soo socda
Tani waxay noqon kartaa Xiaomi Mi Mix 3 cusub
Muxuu noqon karaa sawirradii ugu horreeyay ee cusub ee Xiaoi Mi Mix 2s, terminal beddela booska kamaradda hore, ayaa hadda la sifeeyey
Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition ayaa hadda la heli karaa
Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition ayaa hadda la heli karaa. Raadi wax badan oo ku saabsan noocan cusub ee Samsung-dhamaadka sare ee hadda la heli karo.
Xiaomi waxay soo saari doontaa nooc ka mid ah Xiaomi Mi A1 oo ka hooseeya 200 euro
Shirkadda Shiinaha ee Xiaomi, oo hadda si rasmi ah uga degtay Spain, ayaa dhowaan soo bandhigi doonta nooca Mi A1 oo leh 32 GB oo keyd ah oo dhan 199 euro
Dhibaatada ugu dambeysa ee saameysa Pixel 2 XL waxay saameyneysaa geesaha shaashadda
Ficil ahaan tan iyo markii la soo bandhigay bilawgii Oktoobar, Google Pixel 2 XL wuxuu helayaa dhaleeceyn wuxuuna u soo bandhigayaa dhibaatooyin ...
Kani waa OnePlus 5T oo kuwani waa qeexitaannadooda ugu dambeeya
5 maalmood ka hor soo bandhigga rasmiga ah ee OnePlus 5T, sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ah ee terminaalka ayaa hadda la sifeeyey.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa processor-ka suurtagalka ah ee Galaxy S9: Exynos 9810
Samsung waxay horeyba uga shaqeyneysaa processor-keeda xiga. Kani waa Exynos 9810, waa processor awood badan oo aan ku arki karno Samsung Galaxy S9.
Shirkadda Qualcomm ayaa 12.000 oo qandaraas la saxiixatay shirkadaha waaweyn ee Shiinaha
Waxyar kadib booqashadii Donald Trump ee Shiinaha, waxaa la shaaciyey heshiiska Qualcomm uu la galay shirkadaha waaweyn ee Shiinaha soo saara ee Xiaomi, Oppo iyo Vivo.
Motorola waxay iibisaa laba jibbaar aalado badan sanadkii ka hor
Motorola, oo hadda ku jirta gacanta Lenovo, ayaa aragtay tirada aaladaha la iibiyey intii lagu jiray rubucii la soo dhaafay.
Ka faa'iideyso 11.11 bixiya ee Light in the Box
Soo ogow dalabyada waaweyn ee 11.11 ee Iftiinka Sanduuqa. Ha seegin dalabyada laga heli karo Iftiinka Sanduuqa maanta.
Samsung waxay diyaarisay Galaxy J3 cusub 2018
Samsung ayaa cusbooneysiin doonta Galaxy J3 caanka ah, oo ka mid ah qalabka ugu iibinta wanaagsan shirkadda South Korea. Waan kuu sheegi doonaa!
Samsung waxay sii wadaa inay ku sharaddo taleefannada isku laaban suuqa Shiinaha, maanta sawirrada aaladda soo socota ayaa la daadiyay
Huawei Enjoy 7S: Terminalka xiga ee leh 18: 9 shaashad iyo laba kamarad
Huawei waxay noo diyaarisay terminaal cusub oo leh 18: 9 shaashad ku dhowaad biil la'aan iyo laba kamaradood. Kani waa Huawei Enjoy 7S. Wali ma taqaan isaga?
Ku keydi 225 yuuro adoo wata Yoigo Samsung Galaxy S8 ah
Yoigo wuxuu na siiyaa qiimo dhimis weyn marka ay timaado helitaanka cajiibka Samsung Galaxy S8
Dib u eegista Xiaomi Mi A1
Dib u eegis qoto dheer oo fiidiyoow ah oo ku saabsan Xiaomi Mi A1, oo ah terminaalka imanaya inuu xukumo bartamaha dhexe ee Android qiimo aan caadi aheyn.
Qeexitaannada xaddidan ee is-waafajinta Ocean Ocean
Is-waafajinta Badweynta HTC: Tilmaamaha ayaa la muujiyay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee HTC ee ku garaacaya suuqa 2018.
Ku hel cajiibka Doogee Mix 2 kaliya $ 199
Si looga faa'iideysto jiiditaanka 11 ee 11, ragga Doogee waxay bilaabeen dalab aan caadi aheyn si ay noogu helaan MIX 2 oo kaliya 199 doolar
Samsung ayaa mar kale Apple ku jeesjeesaya xayeysiiskeeda
Samsung ayaa markale sameysay. Haddana wuxuu u adeegsaday Apple meherad cusub. Oo isbarbar dhig isbeddelka Galaxy-ga marka loo eego iPhone-ka.
BLU Studio J8, astaamaheeda iyo qiimaheeda ayaa kugu guuleysan doona
BLU Studio J8 wuxuu dhowaan imaan doonaa Spain isagoo ka mid ah moodooyinka aasaasiga ah ee qoyska, laakiin waxqabadkiisa, qaabeynta iyo qiimaha ayaa kaa yaabin doona
Ka faa'iideyso afartaas dalab ee Lightinthebox ee cajiibka ah
Ragga ka socda Lightinthebox waxay na siinayaan 4 dalabyo cajiib ah oo aanan seegi karin haddii aan raadineyno Sanduuqa TV-ga ama Xiaomi MI A1
OPPO R11S waxay jabisaa diiwaanka ballansashada maalintiisa koowaad
OPPO R11S waxay jabisaa diiwaanada keydka maalinta ugu horeysa. Ka ogow wax badan oo ku saabsan boos celin badan oo taleefanku haystay.
OnePlus wuxuu daabacaa sawirka koowaad ee rasmiga ah ee OnePlus 5T
Sawirka rasmiga ah ee ugu horreeya ee OnePlus 5T ayaa shaaca ka qaaday OnePlus. Calaamadda Shiinaha ayaa daabacda sawirkii ugu horreeyay ee dhammaadkeeda cusub.
Qaar ka mid ah Google Pixel 2 XL ayaa imanaya iyadoon Android la rakibin
Qaar ka mid ah Google Pixel 2 XL ayaa imanaya iyadoon Android la rakibin. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cayayaankan weyn ee aysan telefoonada qaar ku laheyn nidaam ku shaqeeya.
LG wuxuu bilaabay inuu soo saaro Android Oreo LG V30
Ragga ku jira LG waxay raaceen isla talaabooyinka Samsung, waxay horey u fureen waqtiga kama dambaysta ah si ay u bilaabaan tijaabinta beta-kii ugu horreeyay ee Android Oreo ee LG V30
HTC U11 Nolosha: Noocyada udub dhexaad aad u awood badan
HTC U11 Nolosha: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bartamaha dhexe ee 'HTC' oo leh noocyo wanaagsan.
Macaamiisha taleefanka gacanta ayaa qiimo aan caadi aheyn ku leh Banggood
Heshiisyada ugu fiican ee casriga ah ee Banggood. Raadi wax badan oo ku saabsan dalabyada dukaanka caanka ah ee xulkan casriga ah.
Beta-kii ugu horreeyay ee Android Oreo ee S8 iyo S8 + hadda waxaa laga heli karaa waddamada qaarkood
Kuuriyaanka Samsung ayaa bilaabay inay soo saaraan barnaamijka Android Oreo beta ee loogu talagalay Galaxy S8 iyo S8 +.
Razer Phone, waa taleefanka loogu talagalay cayaartoyda
Waxaan ku tusineynaa dhammaan faahfaahinta iyo astaamaha taleefanka casriga ah ee ugu horreeya shirkadda ciyaaraha ee Razer, Razer Phone
Tilmaamaha taleefannada casriga ee Razer ayaa daadanaya, saacado ka hor soo bandhigiddeeda
Saacado ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'Razer smsartphone', shirkadda Britishka ah ee 3G ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay tilmaamaha
Kani waa casriga ugu horreeya adduunka ee 5G
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, Qualcomm wuxuu diyaariyey taleefanka casriga ah ee ugu horreeya adduunka ee 5G, inkasta oo xilligan aan si rasmi ah loo furi doonin.
Google wuxuu hagaajin doonaa dhammaan dhibaatooyinka Pixel 2 wuxuuna abaalmarin doonaa dadka isticmaala
Google waxay balanqaaday inay wax ka qaban doonto dhamaan dhibaatooyinka moobeelada cusub ee Pixel 2 iyo Pixel 2 XL, sidoo kale waxay shaacisay in la kordhin doono damaanada rasmiga ah.
Samsung waxay go'aansatay inay isticmaasho dhowr darsin jir ah Galaxy S5s si ay u dhisto kumbuyuutar qaas ah si loo qodo Bitcoins.
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa cusbooneysiinta amniga anti-malware ee BlueBorn ee Samsung Galaxy J5 (2017) ...
Noocyada Moto C ayaa la muujiyay
Moto C: Tilmaamaha iyo qiimaha xaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Moto C, Motorola-dhamaadka-cusub ee qiimaha qaaliga ah leh.
Google Pixel XL 2 wuxuu dhibaato ku qabaa maqalka markii la duubayo fiidiyowga
Ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatada cusub ee lagu arkay Pixel XL 2. Marka lagu duubo fiidiyowyada taleefanka, maqalka ayaa leh tayo liidata.
Shaashadda Nokia 8 ayaa leh dhibaatooyin
Nokia-ga cusub ee Nokia-8 ayaa ku biiraya liiska taleefannada leh dhibaatooyinka shaashadda. Dhawr ciladood ayaa laga helay shaashaddaada.
Sony Xperia R1 iyo R1 Plus: Qeexitaannada iyo qiimaha taleefannada cusub ee Sony
Sony Xperia R1 iyo R1 Plus: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Sony labada aaladaha casriga ah ee heerka dhexe.
Soo bandhigtay qeexitaannada ugu horreeya ee Galaxy A7 2018
Waxay daaha ka rogtay qeexitaannada ugu horreeya ee Galaxy A7 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Samsung dhexdhexaad-dhexaad cusub ah oo imaan doona 2018.
OnePlus 5T wuxuu lahaan karaa kamaradaha ugu xad-dhaafka badan warshadaha
Faahfaahinta rasmiga ah ee ugu horreysa ee OnePlus 5T, oo ku imaanaysa 8GB oo RAM ah, kamarad gadaal ah oo 20-megapixel ah iyo 18: 9 shaashad.
Samsung wali muhiimad siinin cusboonaysiinta Android
Telefoonada gacanta ee Samsung waxay heli doonaan cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo kaliya sanadka 2018, in kastoo aysan jirin taariikh sax ah xilligan.
Waxaa lagu ogaaday cillad maqalka Google Pixel 2
Waxaa la ogaaday cilad ku timid maqalka Google Pixel 2. Dhibaatooyin dheeri ah oo ku saabsan calaamadda Google oo sidoo kale leh maqal la'aan.
Feejignaanta iyo dareenka ugu horreeya ee Xiaomi Mi A1
Muuqaal fiidiyow ah oo dhameystiran kaas oo aan kuu soo qaadaneyno sanduuqa iyo dareenka ugu horreeya ee Xiaomi Mi A1, Terminaalkii ugu horreeyay ee Xiaomi oo leh Android saafi ah.
Kusoo hel OUKITEL K5000 qiime dhimis iib ah kahor
Ka hel berrito ilaa Oktoobar 29 waxyaabaha cajiibka ah ee OUKITEL K5000 oo ah qiimo xitaa ka sii yaab badan, $ 149,00 !! Ha seegin dalabkan.
Huawei Mate 10 Lite caddaymaha ayaa la muujiyay
Huawei Mate 10 Lite: Qeexitaannada ayaa la xaqiijiyay. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee Huawei, nooca caalamiga ah ee Maimang 6.
Huawei wuxuu noqon karaa kan ku xiga ee leh taleefan casri ah oo isku laaban
ZTE wuxuu ahaa shirkaddii ugu horreysay ee shaacisa taleefan casri ah oo la laaban karo, ZTE Axon M, laakiin Huawei waxay soo bandhigi kartaa moobilkeeda laba-shaashad leh ee 2018
Taleefanka Muhiimka ahi wuxuu ka kharash yar yahay $ 200 wixii hadda ka dambeeya
Shirkadda 'Essential' waxay go'aansatay inay hoos u dhigto qiimaha Telefoonka Muhiimka ah (PH-1) $ 200 kadib markay diiwaangashan tahay iib ka hooseeya intii la filayay.
Samsung ayaa kuu oggolaan doonta inaad moobiilkaaga u beddesho Linux PC
Samsung DeX waxay taageero u heli doontaa barnaamijka Linux ee mashruuca Galaxy, kaas oo qaybinta Linux looga dhex mari karo Galaxy S8 iyo Note 8.
Huawei Mate 10 Pro wuxuu ka fiicnaanayaa iPhone 8 iyo Note 8 oo leh laba kamaradood
Huawei Mate 10 Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay usbuucan DxOMark horeyba waxay ugu soo rogtay tijaabooyin si loo xaqiijiyo tayada kamaraddeeda.
Google Pixel 2 wuxuu maraa tijaabada iska caabinta dhibaatooyinka qaarkood
Google Pixel 2 wuxuu maraa baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything. Raadi haddii dhammaadka-dhamaadka Google uu ka gudbo tijaabadan cusub iyo in kale.
Waxaan horey u ogaanay qeexitaanada HTC U11 Life ee leh Android One
Wax ka baro qeexitaannada HTC U11 Life, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee HTC ee ku shaqeeya Android One oo ah nidaamka hawlgalka.
LG V30 wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Raadi wax badan oo ku saabsan baaritaanka caanka ah ee JerryRigEverything imtixaan ee aan ku dhejin doonno LG V30. Ma ka gudbi doontaa imtixaanka mise maya?
Shaashadda Pixel 2 ayaa siineysa xoogaa dhibaatooyin ah
Dhibaatooyinka ugu horreeya waxay ku soo baxaan shaashadda Google Pixel 2. Isticmaalayaashu waxay ka cabanayaan iftiinka aan sinnayn oo aan midabyo aad u muuqda oo taleefanka ah.
Nokia 7: Nooc cusub oo dhexdhexaad ah oo Nokia ah
Nokia 7: Caddaymaha, qiimaha iyo bilaabida ayaa la xaqiijiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan aagga dhexe ee cusub ee Nokia, Nokia 7. Oo la iibinayo dhowaan.
Marka ugu horeysa ee qeexitaanada iyo qeexitaanada soo socda ee HTC U11 Plus
HTC waxay soo bandhigi doontaa taleefannadeeda cusub ee U11 Plus bisha Nofeembar 2, laakiin hadda sawirradii ugu horreeyay ee mobilka soo socda ayaa soo muuqday.
Marka hore muuji sawirada Samsung Galaxy A5 iyo A7 2018 ee soo socda
Xog xasaasi ah oo dhowaan soo baxday ayaa muujineysa naqshadeynta iyo astaamaha qaar ka mid ah Samsung Galaxy A5 iyo Galaxy A7 oo la qorsheeyay inay soo galaan 2018.
Falanqeyn isbarbardhig kooban oo udhaxeysa BQ Aquaris E10 iyo BQ Edison 3 kiniiniyada, oo ay weheliso qiimahooda iyo qeexitaan farsamo.
Soo bandhigida BLU Vivo 5R, dhammaan awoodda iyo xarrago
Maanta waxaan la kulannaa xubinta ugu awoodda badan ee shirkadda BLU ay u keeni doonto Spain, Vivo 5R, oo ah terminal leh xariiqyo xarrago leh oo ay ka buuxaan waxqabad sare
OUKITEL K5000, oo ah taleefan casri ah oo aad u yar
Taleefan kale oo casri ah oo ka socda OUKITEL, K5000, oo u yimid inuu muujiyo inay suurtagal tahay in waxqabad sare lagu bixiyo qiimeyaal runtii la awoodi karo
Huawei Mate 10 iyo Mate 10 Pro: Astaamaha, Qiimaha iyo Helitaanka
Soo ogow qeexitaanka, qiimaha iyo taariikhaha la heli karo ee cusub ee Huawei Mate 10 iyo Huawei Mate 10 Pro oo leh illaa 6 GB oo RAM ah.
Tani waxay noqon doontaa moobiillada dhabta ah ee leh shaashadaha aan loox lahayn
Soosaarayaasha taleefanka gacanta ayaa lagu qasbi karaa inay abuuraan taleefanno leh shaashado iska-baxa si looga takhaluso giraanta gebi ahaanba.
Oppo F5, mobilada Shiinaha oo kaa ilawsiin doona Samsung iyo iPhone
Oppo F5 waa mobiil shiineys ah oo aad si layaableh u isticmaali karto adigoon waayin wax smartphone sare ah oo leh calaamadda Samsung ama Apple.
Samsung way nuqulan kartaa naqshadda iPhone-ka mustaqbalka
Samsung waxay qorsheyneysaa inay nuqul ka sameyso naqshada mustaqbalka iPhone-ka ee Apple qorsheyneyso inay soo saarto sanadka 2020 oo leh shaashad jilicsan oo OLED ah.
Imtixaanada dib u eegista iyo iska caabinta ee Oukitel K10000 MAX
Halkaan waxaan kuugu dhaafayaa dib u eegista dhameystiran iyo tijaabooyinka iska caabinta ee Oukitel K10000 MAX, dib u eegis iyo wixii ka sareeya tijaabinta iska caabinta oo aan kaa yaabin doonin.
Nokia waxay ku dhowdahay inay ku guuleysato sanadka ugu horeeya
Mobiles-ka Nokia ayaa suuqa taagnaa dhowr bilood hadda waxayna dhajinayaan iibin ka wanaagsan oo ka wanaagsan, marka sanad weyn ayaa loo saadaalinayaa HMD Global.
Taleefoonada qiimaha ugu fiican ee 2017
Waxaan kuu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah mobilada ugu raqiisan 2017, oo leh qiimo aad u fiican oo lacag ah. Telefoonno wanaagsan oo raqiis ah iyo jaantusyo 2017 ah.
NOMU S10 Pro "lama baabi'in karo" ayaa la iibinayaa dhowr maalmood
Haddii aad ogaatay NOMU S10 Pro, midka kaliya ee suuqa ku leh shahaadada IP69, hadda waxaad ku heli kartaa iyada oo la siinayo waqti kooban
OUKITEL MIX 2, cusub oo ka timid soosaaraha Shiinaha
La kulan OUKITEL MIX 2, soosaarahan Shiinaha ah ee ka go'an dusha sare, taleefan casri ah oo ka dhigi kara carruurta ugu waaweyn
Razer ayaa soo bandhigi doonta taleefankeedii ugu horreeyay ee ugu horreeya bisha Nofeembar 1
Soo saaraha ciyaaraha Razer ayaa isku diyaarinaya inuu soo bandhigo taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee Nofeembar 1, oo ah mobiil loogu talagalay ciyaaraha.
Nokia 2, 7 iyo 9 ayaa bilaaban kara horaanta sanadka 2018
Telefoonada casriga ah ee Nokia ay soo saartay ee Android ayaa imaan doonta horaanta sanadka 2018, sida laga soo xigtay ilo wareedyo ku jira silsiladda shirkadda soo saarta.
Dhowr sababood oo loo iibsado Vernee Mix2
Vernee Mix 2, taleefan kale oo casri ah oo loogu yeero inuu sare u qaado heerka kala-goynta dhexdeeda taas oo ay ku sii adkaaneyso in la istaago, Vernee ayaa ku guuleysatay inay sameyso
Sharafta 7X faahfaahinta iyo qiimaha la muujiyay
Websaydhka hay'adda isgaarsiinta Shiinaha ayaa soo bandhigaya qeexitaannada taleefannada casriga ee soo socda ee Honor 7X
Ku hel Xiaomi Mi6 qiimo aan caadi aheyn !!
Banggood.com dalab gaar ah oo aad ka heli karto dhan Xiaomi Mi6 qiimo aan caadi aheyn oo ah 381,28 Euros, moodel 6 Gb RAM 64 Gb ROM
Shaybaarkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee kamaradda Pixel 2 ayaa halkan yaal
Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee sawirrada kamaradda Pixel 2 waxaa daabacay Google waxaadna ku arki kartaa boggayaga.
Samsung ayaa ku dhawaaqday noocyo gaar ah oo ah Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8
Galaxy S8 cusub iyo Note 8 Enterprise Edition waxay leeyihiin astaamo la mid ah moodooyinka caadiga ah, laakiin waxay keenaan faa'iidooyin dheeri ah oo dheeri ah.
Google wuxuu sharxayaa sababta Pixel 2 uusan uheyn daaqad maqal
Google Pixel 2 ayaa yimid bishaan isaga oo wata dekedda USB-C ee sameecadaha, waxaana shirkaddu heshay dhaleeceyn badan oo ku saabsan baabi'inta dekedda 3.5mm.
Samsung waxay lahaan doontaa taleefan la laaban karo, laakiin waxay noqon doontaa wax aan macquul aheyn in la iibsado
Samsung Galaxy X wuxuu noqon karaa taleefankii ugu horreeyay ee shaashad isku laaban oo laga helo shirkadda Kuuriyada Koofureed, waxaana bilaabashadiisu dhici kartaa sannadka 2018-ka.
Samsung Galaxy A5 (2018) wuxuu noqon doonaa mobiil hagaagsan hadaadan lacag uheyn Galaxy S8
Sawiradii ugu horreeyay iyo qeexitaannada Samsung Galaxy A5 (2018) ayaa mar horeba la sii daayay, oo bilawgiisa loo qorsheeyay horaanta 2018
Nokia 8 wuxuu ku gudbaa imtixaan dulqaad leh oo aan kaaga tagi doonin danayn la'aan
Nokia 8 waxaa la mariyay tijaabo adkeysi iyadoo la adeegsanayo furayaal, mindiyo iyo xoog, laakiin si badbaado leh ayey uga badbaaday. Ha moogaan fiidiyowga.
Furashada sanduuqa iyo dareenka ugu horreeya ee Oukitel K10000 MAX, terminalka leh 10000 mAh baytariga iyo dhisme bambo caddeyn ah
Asus ZenFone V wuxuu ku socdaa iibka Mareykanka qiimo dhan $ 384
Hawl wadeenka taleefanka Verizon wuxuu bixiyaa Asus ZenFone V oo leh 23 MP Sony shidma ah iib ahaan si gaar ah Mareykanka
Kala shaandheeyay bixiyaha koowaad ee BlackBerry "Krypton"
BlackBerry Krypton wuxuu suuqa u gali lahaa bishaan Oktoobar magaca BlackBerry Motion. Ha moogaanin muuqaalka ugu horreeya ee bixiyaha boosteejada.
Google Pixel 2 ayaa hadda haysta kamaradda ugu fiican adduunka, sida uu sheegayo DxOMark
Google Pixel 2 wuxuu dhaafiyey iPhone 8 Plus iyo Samsung Galaxy Note 8 oo ah mobilada leh kamarada ugu fiican aduunka, sida ku cad dib u eegista DxOMark.
Dib u eeg Oukitel K3, Android-ka leh batari weyn oo dhan 6000 Mah
Dib u eeg fiidiyowga laga duubay Oukitel K3 lafteeda taas oo aan ku sharraxayo dareenkayga ka dib qiyaastii sagaal maalmood oo ah isticmaalka degdegga ah ee terminaalka
Shanta ogeysiis ee ugu waaweyn ee ay Google ka sameysay dhacdada Pixel 2
Waxaan soo bandhigeynaa badeecooyinka ugu waaweyn ee ay Google ku soo bandhigtay dhacdada Pixel 2, oo ay ku jiraan qalabka dhageysiga ee Pixel Buds, laptop-ka Pixelbook iyo waxyaabo kale oo badan.
La kulan BLU R2, ugu dhakhsaha badan Spain
La kulan nooca cusub ee 'R2', oo ah sharad weyn oo ka socota shirkadda BLU Products si aad ugu guuleysato bartamaha dhexe ee Android ee Spain oo leh terminal tayo leh
Huawei Mate 10 wuxuu la imaan doonaa hawl la mid ah Windows Phone's Continuum
Nidaamka Windows Phone Sii-wadida u eg ayay Huawei ugu isticmaali kartaa calanka cusub ee Mate 10 iyo Mate 10 Pro.
Google Pixel XL 2 waa la sifeeyaa kahor intaan si rasmi ah loo bilaabin
Google Pixel XL 2 wuxuu la imaan doonaa naqshad casri ah marka loo eego kuwa ay sida weyn u xafiiltamaan ee Samsung iyo Apple, maadaama shaashaddiisa aan la qalloocin doonin.
Xiaomi waxay ka furi doontaa dukaankeedii ugu horreeyay ee muuqaal ahaaneed ee Spain bisha Nofember
Shirkadda Shiinaha ah ee Xiaomi ayaa ka furi doonta dukaankeedii ugu horreeyay ee rasmi ah dalka Spain bisha soo socota ee Nofeembar, taasoo ku taal xarunta laga dukaameysto ee Xanadú, oo qiyaastii 20km u jirta Madrid.
OnePlus 6 wuxuu imaan lahaa bilowga sanadka 2018 oo leh shaashad 6-inch ah oo aan xayndaab lahayn iyo Snapdragon 845
Waxay umuuqataa in OnePlus 6 lafilayo sanadka dambe lana soo bandhigi doono horaanta 2018. Waxaan shaaca kaqaadey qeexitaankiisa farsamo ee suurtogalka ah.
Huawei Mate 10 Pro, ayaa xaday sawirradii ugu horreeyay
Sawirradii ugu horreeyay ee Huawei Mate 10 Pro waa la sifeeyey, calanka cusub ee qoyska Mate ee fbarica Aasiya oo ku soo laabanaya sharad Leica
BLU Products waxay ku taal Spain
Maanta Androidsis iyada oo loo marayo server wuxuu ku yaalaa meel aad u gaar ah. Maanta waxaan u guurnay Valencia….
LEAGOO S8 iyo S8 PRO hadda waa rasmi: Tilmaamaha, qiimaha iyo helitaanka
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan tilmaamaha LEAGOO S8 iyo S8 PRO, oo ay weheliso faahfaahin ku saabsan qiimayaashooda iyo helitaankooda.
Dib-u-eeg MAZE Alpha 4G the 6 ″ aan lahayn loox kaa yaabin doona qiimaha lacagta
Dib-u-eegista fiidiyowga oo dhameystiran oo loo ballanqaaday MAZE Alpha, in ka badan 30 daqiiqo oo aan si faahfaahsan ugu sharxayo dhammaan wanaagga iyo wax kasta oo xun ee ku saabsan MAZE Alpha.
Mobilada Isbaanishka ugu fiican
Isbaanishku waa xarun farsamo oo muhiim ah aduunka oo dhan, waxaana cadeyn fiican u ah tan xulashadan qaar ka mid ah mobilada Isbaanishka ugu fiican
Soo bandhig !! Ku hel Moto G4 kaliya 150 euro
Hadda waxaad ku heli kartaa Moto G4 oo leh 5,5 "shaashadda FHD, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo keyd ah iyo 13MO kamarad oo keliya € 149,99
ZTE Axon M wuxuu noqon karaa mobiilkii duubnaa ee ugu horreeyay suuqa
ZTE Axon M waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar ee soo socota iyada oo shaashad isku laaban oo markii la furo sameeya hal shaashad 6.8 inji
Sawirada cusub ee muuqaalka ah ee Huawei Mate 10 waxay muujinayaan taleefan cajiib ah
Sawiradii ugu dambeeyay ee laga bixiyay Huawei Mate 10 waxay muujinayaan xagga hore iyo gadaal ee terminaalka, halkaas oo ay ku taal laba kamarad iyo akhristaha sawirka faraha.
Calaamadaha soo socda ee Sony Xperia ayaa la imaan doona dib u habeyn dhameystiran
Mid ka mid ah maamulayaasha shirkadda Sony ayaa dhowaan xaqiijiyay in taleefannada sare ee soo socda ee shirkadda soo bandhigi doonaan naqshad gebi ahaanba cusub.
Inta badan qeexitaanada farsamo ee Google Pixel 2 iyo Pixel 2 XL ayaa xaday
Ilo ayaa go'aansaday inay daadato ku dhowaad dhammaan qeexitaannada farsamo ee soo socda ee Google Pixel 2 iyo Pixel 2 XL. Ha moogaan
Feejignaanta iyo dareenka ugu horreeya ee Oukitel K3.
Halkaan waxaad kuheleysaa sanduuqii sanduuqa iyo aragtida koowaad ee Oukitel K3, terminal-ka Android ee wata batteriga weyn ee 6000 mAh, shaashadda HD-ga oo qiimo qosol leh.
DOOGEE S60, aad uga badan taleefannada casriga ah ee rooga ah
Doogee S60 waa taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo loogu talagalay inuu ku sii jiro xaaladaha shaqada ee aadka u daran. Waxay leedahay 6 GB oo RAM iyo Android Nougat.
Furashada MAZE Alpha 4G oo lala yaabay ayaa lagu daray
Furey ama aan xirneyn MAZE Alpha, oo ah 6 "terminal shaashad shaashad ah oo dusha sare iyo dhinacyadu ay si weyn uga muuqdaan maqnaanshahooda.
BlackBerry Krypton ayaa markii ugu horreysay ku soo baxa sawir
BlackBerry Krypton wuxuu noqon doonaa taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah kaas oo imaan doona bisha Oktoobar ee soo socota iyada oo aan lahayn kumbuyuutar jirka ah iyo shaashad taabasho Full HD ah.
Saxaafadda Shiinaha waxay neceb tahay Galaxy Note 8
Galaxy Note 8 ayaa heshay saxaafad badan oo xun tan iyo markii ay timid Shiinaha, halkaas oo warbaahintu ay ku barbardhigayso iPhone-ka isla markaana tilmaamayso meelaheeda yar ee hore.
Google wuxuu ka iibsanayaa ganacsiga Pixel shirkadda HTC lacag dhan $ 1.100 bilyan
Kadib xanta dhowr ah kadib, Google iyo HTC ayaa ugu dambeyn soo daabacay heshiiskooda ay Google kaga iibsan doonto shirkadda HTC shirkadda casriga ah ee Pixel
OnePlus 5 wuxuu yeelan doonaa daabacaad gaar ah
Sameeyaha taleefannada casriga ah ee OnePlus wuxuu la shaqeeyaa naqshadeeyaha moodada Jean-Charles de Castelbaja si loo abuuro daabacaad xadidan OnePlus 5
LEAGOO KIICAA MIX, oo hadda lagu heli karo wax ka yar € 120
LEAGOO KIICAA MIX waa taleefannada casriga ee cusub ee shirkaddan; 5,5 "ku muuji shaashad jilicsan, qaab-dhismeed aan xaddidneyn oo leh qaybaha ugu tayada sarreeya
Android-ka ugu dhaqsaha badan suuqa wuxuu ku dhacaa iPhone 8 heerarka ugu horreeya
IPhone 8, 8 Plus iyo iPhone X cusub ayaa leh processor-ka Apple ee A11 Bionic, halka Galaxy S8 uu leeyahay Snapdragon 835.
OUKITEL Mix 2 iyo OUKITEL C8, waa labo taleefan oo shaashadooda ka yaabisay
OUKITEL waxay diyaarisaa laba taleefan oo cusub, OUKITEL C8 iyo OUKITEL Mix 2, oo u taagan shaashaddooda aan dhammaadka lahayn, naqshadeynta xannibaadda iyo qiimaha la hagaajiyay.